भारतीय युवकको नक्कली प्रेममा परेकी २२ वर्षकी युवतीलाई बुर्का लगाएर लगिदै थियो ? झण्डै यसरी जोगिइन् – Sunaulo Nepal TV
भारतीय युवकको नक्कली प्रेममा परेकी २२ वर्षकी युवतीलाई बुर्का लगाएर लगिदै थियो ? झण्डै यसरी जोगिइन्
काठमाडौ । भारतीय युवकको नक्कली प्रेममा परेकी एक युवतीलाई भारतीय सिमानावाट उद्दार गरिएको छ । उनलाई बे च्न लैजान लागेको आशंकामा उद्दार गरिएको हो । पर्साको वीरगञ्ज नाकाबाट उद्धाार गरीएकी २२ वर्षीया युवती भारतीय एक युवकको प्रेममा परेकी थिइन् ।
भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा नुवाकोट घर भएकी २२ वर्षीय युवतीको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। उनीहरुलाई भारत जाँदै गर्दा वीरगजञ्ज नाकाबाट उनको उद्धार गरेको हो। ति युवतीलाई युवकले विवाह गर्छु भन्दै भारत लैजान लागेका थिए ।
ति भारतीय युवालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतको पूर्वी चम्पारणको भुलाही घर बताउने ३३ वर्षीय मुन्ना आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–१७ अलौस्थित वैकल्पिक नाकाबाट ती युवतीलाई भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा आलम पक्राउ परेका हुन्। युवती बुर्का लगाई कसैले नचिन्ने गरी भारत लैजान लागेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले रोकेको थियो।
आलमले ती युवतीलाई बारा घर भएका २१ वर्षीय अरविन्द रामसँग मिलेर सीमा पार गराउने योजना बनाएका थिए । आलमले आफू अविवाहित भएकाले विवाह गर्ने आश्वासन दिएर युवतीलाई लिएर जाँदै थिए । उद्धार गरिएकी युवतीलाई प्रहरीले आफन्त नेपालको संरक्षणमा राखेको छ। फाइल तस्बिर
Previous दशैको मुखमा सुनको मुल्य घट्यो
Next यिनी हुन नेपालकै पहिलो महिला प्रहरी, सरकारले दियो यति ठूलो सम्मान